Ifowuni: 86 13563691323
Ukuveliswa kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza
i-bio esekwe kwi-asidi ye-succinic / ye-bio esekwe kwi-bio
Umthombo wobuchwephesha: Ukuveliswa kwe-acid ye-succinic acid ngobuchwephesha bokubila kwe-microbial: itekhnoloji ivela kuprofesa zhang xueli iqela lophando "leziko lobuchwephesha bemveliso ye-microbial, i-Chinese academy of science (tianjin)". Obu buchwephesha bufumana olona hlobo lobuchwephesha lufanelekileyo kwihlabathi. Iimpawu zemveliso: Izinto eziluhlaza zivela kwiswekile yesitashi ehlaziyekayo, yonke inkqubo yemveliso evaliweyo, isalathiso somgangatho wemveliso sifikelela kwi ...
I-Bio-based sodium succinate (WSA)
Iimpawu: Isodium inencindi yiglass ecwecwe okanye umgubo, ongenambala umbala omhlophe, ongenaphunga, kunye nencasa ye-umami. Umbala wokungcamla yi-0.03%. Kuzinzile emoyeni kwaye kulula ukunyibilika emanzini.
Izinto eziluncedo: Isebenzisa iswekile yesitatshi ehlaziyekayo njengezinto ezingavuthiyo ukuvelisa ngokuthe ngqo isodium succinate ngokusebenzisa ukubila kwentsholongwane. Yimveliso ye-biomass emsulwa; yinkqubo eluhlaza ecocekileyo ngaphandle kongcoliseko, kwaye umgangatho wemveliso ukhuselekile kwaye uthembekile.
I-Bio-based 1, 4-butanediol (BDO)
I-Bio-based 1,4-butanediol yenziwa nge-bio-based succinic acid ngokusebenzisa iinkqubo ezinje nge-esterification, hydrogenation, kunye nococeko. Umxholo we-bio-carbon ufikelela ngaphezulu kwe-80%. Sebenzisa i-bio esekwe kwi-1,4-butanediol njengempahla eluhlaza, iiplastikhi ezinokuboliswa ziintsholongwane i-PBAT, i-PBS, i-PBSA, i-PBST kunye nezinye iimveliso ezivelisiweyo ziyiplastiki ezinokutshabalalisa i-biomass kwaye ziyayithobela ngokupheleleyo imigangatho yomxholo we-biomass.